I-37 YEYONA NDAWO ILUNGILEYO YESIFRENTSHI YOKUCHEBA IINWELE ZAMADODA (ISIKHOKELO SE-2021) - IINWELE ZAMADODA
Inwele yesiFrentshi yokucheba iinwele
Eyona Iinwele Zamadoda Inwele yesiFrentshi yokucheba iinwele
Isityalo saseFrance sesinye sezona zinwele zifutshane zibalaseleyo emadodeni ngoku. Ikwabizwa ngokuba kukucheba iinwele okuphezulu, iinwele zezityalo zaseFransi zinika isimbo esingaphelelwa lixesha sokulunga…
Isityalo saseFrance sesinye sezona zinwele zifutshane zibalaseleyo emadodeni ngoku. Ikwabizwa ngokuba kukucheba iinwele okuphezulu, iinwele zaseFrance ezinikezela ngesitayile esingapheliyo ngesizathu esivakalayo. Iinwele ezinqanyuliweyo zamadoda zilula, zinestayile, kwaye zisebenza kulo lonke uhlobo lobuso. Abafana banokukhetha phakathi kokuphela kunye nokuhamba ngaphantsi emacaleni, kwaye badibanise ukusika kunye nesityalo esifutshane okanye eside saseFransi ngaphezulu. Ngapha koko, ukwenza isitayile sokuphela kwesityalo kulula-sebenzisa imveliso ye-matte ukwenza isityalo esimiselweyo esibonakala sendalo kwaye sihamba kakuhle.
Ukugcinwa okupholileyo kunye nolondolozo olusezantsi, isityalo sanamhlanje saseFrance sinokuba sisinwele sakho esilandelayo! Ukusuka kwindawo ephezulu yokuphela kwesiphelo ukuya kwimiphetho eqingqiweyo, ezi zezona zilungileyo zokucheba iinwele zaseFrance zamadoda ukuze zifumane kulo nyaka!
1Yintoni isivuno saseFrance?
MbiniIzitayile zaseFransi zokuLima
2.1Isityalo siPhezulu siphele
2.2Isityalo siPhezulu esiPhezulu
2.3Isityalo siPhezulu esiPhezulu
2.4Isityalo esiPhakathi esiPhakathi siphela
2.6Isityalo saseFrance kunye nolusu luphela
2.7Isityalo esifutshane saseFrance
2.8Isityalo eside saseFrance
2.10Isityalo esiqhelekileyo saseFransi
2.11Isityalo esiTyiweyo saseFransi
2.13Isityalo esiPhezulu siphela ngeenwele ezithe tye
2.14Iinwele eziCinyiweyo ezinamandla
2.16Isityalo saseFransi sokuLungisa iinwele
2.17Isityalo saseFransi + esineMpandla ePhakamileyo
2.18IsiQinisekiso seZityalo esisikiweyo + soLusu oluPholileyo + iindevu
2.19I-Bald Fade esezantsi + Iinwele eziMfutshane eziValiweyo
2.20Ukuphela okuphezulu kweBald +
2.21Isivuno esifutshane + Razor High Fade
2.22Isilimo esiMnandi esiPhezulu + esiPhakathi esiShiyekileyo siphela
2.23Ukuphela kweTempe + Isityalo esifutshane Phezulu
2.24IsiQinisekiso esiTyhidiweyo sesiFrentshi + esichebiweyo siphele + iindevu
2.25Iinwele eziColiweyo eziWavy + iTaper Fade
2.26Ukuphela kweTaper Tade + Ukuya phezulu + Isityalo esiqinileyo
Yintoni isivuno saseFrance?
Isivuno saseFrance yindawo entsha yamadoda yokwenza iinwele ezimfutshane emacaleni nasemva ngeenwele ezimfutshane ngaphezulu. Ihlala isikwa nge-taper fade okanye i-undercut emacaleni, ukunqunyulwa kwesivuno kuza nomphetho ofana noKesare osikiweyo. Ezi bangs zimfutshane ngaphambili kwentloko ziyekwe zixhonywe ngaphezulu kwebunzi.
Amadoda angacela abachebi beenwele zabo ezimfutshane okanye ezinde, kuxhomekeke kwisitayile sabo. Ekugqibeleni, isiqhamo sesityalo saseFransi singabonakaliswa sicocekile okanye sicocekile kwaye siqonde.
Uninzi lwabafana lisebenzisa ukukhanya okuphantsi, ukubamba okuphantsi, i-wax, okanye imveliso yodongwe yokuthambisa iinwele. Isiphumo sokulungiswa kwentloko yesityalo ebonakala indalo kwaye isempilweni ngevolumu kunye nokuhamba.
Izitayile zaseFransi zokuLima
Isityalo sesiFrentshi, okanye nayiphi na inwele enqamlezileyo ngalo mbandela, ivumela ulwenziwo oluthile. I-twist kwi-classic cut cut, isitayela sikunika inketho yokuthungwa, i-spike, okanye ukutshayela ezinye okanye zonke iinwele zakho.
Ngokumalunga nendlela osika ngayo iinwele emacaleni, ungacela isitayile sakho ukuba siphele kwinani lezinto ezahlukeneyo - ukusuka kulusu oluphezulu luphela ukuya kwelona lisezantsi. Ngapha koko, abafana banokukhetha ukudibanisa iinwele kunye neendevu.
Ukuba ufuna uncedo ngokuthatha isigqibo sokunqunyulwa kwesitayile sakho okulandelayo kunye nesitayile, ke qiniseka ukuba uzisebenzisa ezi ndlela zokuzonwabisa zilunge kakhulu!
Isityalo siPhezulu siphele
Ukuphela kwesityalo okuphezulu yenye yezona zinwele zilungileyo zamadoda zonyaka. I-Sleek kwaye inemfashini, isityalo saseFrance esiphelayo sithatha iinwele ezimfutshane ukuya kwinqanaba elilandelayo. Abafana banokhetho lokufumana isezantsi, esiphakathi, okanye esiphakamileyo sokuphela kwamacala emacaleni nasemva, kunye nenketho yokongeza i-bald okanye ulusu luphele.
Ekugqibeleni, ukufiphala kweenwele kuphelile ngokufanelekileyo ukulungiselela naziphi na izimvo zesitayile. Nokuba ufuna ukutshayela umphetho ecaleni, shiya ii-bangs zakho zixinene kwaye zinde, okanye usike umphambili, isivuno esiphelileyo sisebenza ngazo zonke iintlobo.
Isityalo siPhezulu esiPhezulu
Isiqwenga sesityalo esinefade esezantsi isitayile esihle samadoda afuna ukujonga okunomtsalane, okuthandekayo. Iinwele ezomileyo ezisezantsi ezomileyo zingasentla kweendlebe kunye namagophe ajikeleze iinwele zokugqibela. Ukugqwesa kubachwephesha abafuna ukuzama ukutshintsha kweenwele zamva nje, indawo ephezulu yokuphela kwezityalo yindawo entle yokuqala.
Indawo ephezulu yokuphela yesityalo sisinwele esinqabileyo nesikhethekileyo kubafana abafuna ukuma phakathi kwesihlwele. Sika phezulu kumacala nangasemva, i-taper ephezulu yokuphela kweenwele kukhulisa umahluko. Ngenxa yokunciphisa okufutshane kakhulu, izitayile eziphezulu zetaper kakuhle kunye nesityalo esifutshane kunye nesiFrentshi.
Isityalo esiPhakathi esiPhakathi siphela
Isiphelo esiphakathi sesityalo esidityanisiweyo sidibanisa i-edgy, imfashini, kunye nokubukeka okuhle ngokokusika okukodwa. Ukucheba iinwele okuphakathi kumacala anesityalo saseFrance ngaphezulu akubhenisi kakhulu, kodwa kugqamisa ulusu olukhangeleka lulutsha.
I-undercut iyaqhubeka nokuba yizinwele ezithandwayo ezisebenza kakuhle nazo zonke iintlobo zezitayile. Isityalo esingaphantsi kwesityalo saseFrance sinika umahluko omangalisayo kuba amacala kunye nomqolo onke anobude kwaye asekhohlo enqanyuliweyo kwizinwele ezingaphezulu. Eyodwa kwaye intsha, zama isitayile esahlukileyo ukufumana inkangeleko oyithandayo.
Isityalo saseFrance kunye nolusu luphela
Ukuphela kolusu kukucheba mfutshane kakhulu okudibanisa amacala kunye nokubuyela kulusu. Ikwabizwa ngokuba yi-bald fade, abafana banokuthatha isigqibo sokudibanisa isityalo sabo saseFransi esinomgangatho ophezulu, ophakathi, okanye ophantsi wokucheba ulusu. Ukugqitywa kwe-bald kungongeza enye into kwisiqhamo sakho esiphelile, kwaye siqinisekile ukuba uyayithanda.
Isityalo esifutshane saseFrance
Isivuno esifutshane saseFrance silunge ngakumbi kumadoda afuna iinwele ezipholileyo ezingafuneki nasiphi na isitayile. Ngelixa isiqhamo sesityalo ngokwemvelo sisinqumleli esifutshane, zikhona iindlela zokulungisa iinwele.
Umzekelo, amadoda aneenwele ezishinyeneyo anokusondela kwi-buzz cut ephezulu ngelixa egcina ii-bangs zawo zichetyiwe kwaye zinqunyiwe. Kwangokunjalo, ukuba ufuna iinwele ezimfutshane, ezilungisiweyo, faka isixa esincinci semveliso ye-matte ukuze ufumane imbonakalo yendalo, egqityiweyo.
Isityalo eside saseFrance
Isityalo eside saseFrance sinokuthelekiswa nabasebenzi abasikiweyo ngobude obuthile ngaphambili. Isifutshane kodwa ngokuthelekisa isitayile, ukunqunyulwa kwesivuno okude kuza nomqukumbelo omde kunye nevolumu ephezulu ngaphezulu.
Isibonelelo seenwele ezinde kukuba abafana banokutshintsha iinwele zabo ngokusika okufanayo. Ungafezekisa icala elitshayelweyo ngesimbo se-Ivy League, ikama elifutshane ngaphezulu kokuphela, okanye iinwele ezi-spiky nanini na ufuna.
izindlu zokuvumisa ngeenkwenkwezi intsingiselo
Isityalo sanamhlanje siza nefilade yokuphela emacaleni kwisitayile esibi. Ukunqunyulwa kwesivuno sanamhlanje yeyona nguqulelo ithandwayo kuba kulula kwaye kulula kwisitayile. Amacala aphelileyo anika nekhonkco ukubonakala kwendoda, ekuvumela ukuba ushiye umphezulu omfutshane okanye omde ukuze ulungele ukhetho lwakho.
Isityalo esiqhelekileyo saseFransi
Isityalo esiqhelekileyo saseFrance sidinga amacala afihliweyo kunye neenwele ezichetyiweyo ukuze zibonakale zilungile, zintle. Ngaphandle kokungafani kakhulu, le nwele yeklasi ibonelela ngesitayile esicocekileyo esifanelekileyo kumadoda aziingcali kwishishini. Isitayile esona sigqubuthelo phezulu kunye necala elitshayelweyo lomphetho ukwenza ukugqiba okungafaniyo.
Isityalo esenziwe ngombala saseFransi sibonelela ngendlela erhabaxa nenomtsalane yokuthambisa iinwele zakho ezimfutshane. Ngokwendalo kunye nefashoni, iinwele ezilungisiweyo ezibonakala zintle nge-wavy eshinyeneyo, iinwele ezigobileyo okanye ezithe nkqo.
Xa ubhala isitayile, sebenzisa ipomade elungileyo okanye i-wax kwaye usebenze ngemveliso ngokulinganayo ngeenwele zakho. Ubume obongezelelekileyo buza kongeza i-chic kodwa ngaphandle kokuzikhandla kwisivuno sakho.
Iinwele ezityiweyo ezithunyelweyo zibonakala zimnandi kwaye zidlala, ngakumbi kubafana, kulutsha nakumadoda aselula. Xa ubhala isitayile esingcolileyo ngaphezulu, sebenzisa imveliso yokubamba ukukhanya ukugcina iinwele zihamba kwaye zidumbile.
Isityalo esiPhezulu siphela ngeenwele ezithe tye
Amadoda aneenwele ezithe tye athanda isityalo esingasentla ngenxa yokuba kulula ukwenza iinwele kwaye azigcine. Emva kokucheba ukunqunyulwa kweenwele, sasaza yonke imveliso, kwaye dibanisa iinwele zakho phambili. Inkangeleko enesitayile kufuneka igudile, intekenteke kwaye ithambe ekuphathweni.
Iinwele eziCinyiweyo ezinamandla
Iinwele ezityiweyo zilungile kumadoda aneenwele ezi-wavy. Amaza anikezela ubume obukhethekileyo kwaye ujonge ezinye iindlela ezinokutshatisa. Iinwele ezinqamlezileyo kufuneka zibhalwe ngokuzimela kwaye zihambe, zikuvumela ukuba ulonyuse uhlobo lweenwele zendalo.
zithini iimpawu zam zehoroscope
Fumana i-fringe enqamlezileyo ukuba ufuna ukwenza ngokwezifiso iinwele eziphezulu zokucheba ngokusikwa okubukhali ngaphambili. Ichoppy bangs ezinqunqiweyo zisebenza kakuhle ngeenwele ezishinyeneyo nezimfutshane. Kodwa fumana i-trim kuphela ukuba unenwele ecocekileyo okanye ibunzi eliqhelekileyo.
Isityalo saseFransi sokuLungisa iinwele
Amadoda aneenqwelo moya ezindizayo ngamanye amaxesha akhetha isivuno saseFrance kuba sinokuthatha ingqalelo kude namabala anempandla kunye nokucheba kweenwele. Ngokufanelekileyo, uya kufuna ukuphela kwesikhumba esiphezulu ukunciphisa ukungafani phakathi kwamacala akho kunye neenwele. Amadoda alinganayo uya kufuna ukushiya iinwele ngaphezulu ixesha elide ukuvumela ukugubungela indawo ezincinci, kwaye usebenzise udongwe lwesitayile ukunika ukubonakala kweenwele ezigcweleyo.
Isityalo saseFransi + esineMpandla ePhakamileyo
IsiQinisekiso seZityalo esisikiweyo + soLusu oluPholileyo + iindevu
I-Bald Fade esezantsi + Iinwele eziMfutshane eziValiweyo
Ukuphela okuphezulu kweBald +
Isivuno esifutshane + Razor High Fade
Isilimo esiMnandi esiPhezulu + esiPhakathi esiShiyekileyo siphela
Ukuphela kweTempe + Isityalo esifutshane Phezulu
IsiQinisekiso esiTyhidiweyo sesiFrentshi + esichebiweyo siphele + iindevu
Iinwele eziColiweyo eziWavy + iTaper Fade
Ukuphela kweTaper Tade + Ukuya phezulu + Isityalo esiqinileyo
amadoda iinwele ngasemva
iinwele ezahlukeneyo zamadoda
indlela yokuqonda uphawu lwam olukhulayo
2 3 ukucheba iinwele